FBC - Taphoonni Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 11ffaa borii jalqabee geggeeffamu
Taphoonni Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 11ffaa borii jalqabee geggeeffamu
Finfinnee, Amajjii 3, 2010 (FBC) Taphoonni Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 11ffaa borii jalqabee Finfinnee fi magaalota naannootti geggeffamu.
Akka sagantaa ba’etti taphoonni torban kanaa Jimaata, Sanbat-duraa fi Dilbata Finfinnee fi magaalota naannootti akka geggeffaman Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa beeksiseera.
Bor Waldiyaan Qiddus Giyoorgis waliin sa’aatii 9 irratti nitaphatu.
Sanbat-duraa Isteediyamii Finfinnee irratti magaalaan Faasil Magaalaa Maqalee waliin guyyaa sa’aatii 10 irratti nitaphatu.
Taphi gareewwan lamaanii taphoota sadii Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa torban darbe bakka isaanii jijjiire keessa tokkodha.
Dilbata Dadabiit Yuunivarsitii Walwaaloo Addigiraat waliin Isteediyamii Finfinnee irratti sa’aatii 10 irratti taphatu.
Magaalota naannootti Jimmaa Abbaa Jifaar Ittisa waliin, darbii Kibbaan Walaayittaa Diichaa Magaalaa Arbaaminc waliin, Magaalaan Adaamaa Buna Itiyoophiyaa waliin, Magaalaan Hawaasaa Itiyoo-elektirika waliin sa’aatii wal-fakkaataa sagal irratti kan taphatan ta’a.
Magaalaan Dirree Dawaa buna Sidaamaa waliin sa’aatii 9 daqiiqaa 30 irratti taphasaanii nigeggeesssu.
Pirimiyar liigicha Dadabiit qabxii 22n wayita dursu, Qiddus Giyoorgis qabxii 16n lammaffaa, Faasil fi Magaalaan Adaamaa qabxii wal-qixa 15 galchiin wal-caalanii sadarkaa sadaffaa fi arfaffaa wayita qabatan, Jimmaa Abbaa Jifaar fi Magaalaan Maqalee qabxii wal-qixa 14 galchiin wal-caalanii sadarkaa shanaffaa fi ja’affaa irra taa’aniiru.
Magaalaan Hawaasaa fi Bunni Itiyoophiyaa qabxii wal-qixa 12n galchiin wal-caalanii sadarkaa torbaffaa fi saddeettaffaa qabataniiru.
Magaalaan Dirree Dawaa, Itiyoo Elektirikaa fi Magaalaan Arbaaminc wal-duraa duubaan sadarkaa 14 hanga 16 qabachuun sadarkaa dhumaarra jiru.
Galchii baay’ee galchuun Geetaana Kabbbadaa Dadabiit fi Lammiin Gaanaa taphataa Itiyoo Elektirik Al Hasan Kaalushaa galchii wal-qixa torbaan wayita dursan , taphataan Naayijeeriyaa Jimmaa Abbaa Jifaar Okiikii Afolaabii galchii ja’aan, Abeel Yaalaw Dadabit fi taphataan Buna Sidaamaa Addis Giday ammoo galchiiwwan wal-qixa shaniin itti aanu.
Oduuwwan Biroo « Filannoon preezdaantummaa fi koree hoji raawwachiistuu federeeshinichaa dabarfame	Taboonni priimiyar liigii Ityoophiyaa torbee 11ffaa har’aa fi boris itti fufaniit gaggeeffamu »